Karnalikhabar » नेपाली ग्यास बुलेट किन रोकियो भारतमा ? नेपाली ग्यास बुलेट किन रोकियो भारतमा ? – Karnalikhabar
प्रकाशित मिति :2017-08-11 01:48:21
काठमाण्डौ । नेपाली ग्यास बुलेट प्रयोग गर्नका लागि सरकारले चासो नदिएको भन्दै निजी ग्यास ढुवानीकर्ताले ग्यास ढुवानी नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाली नम्बरका बुलेट सञ्चालनका लागि डेढ बर्ष देखि सरकरालाई आग्रह गर्दापनि वेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ । हालसम्म करिब ४ सय थान बुलेट निर्माण भई भारतमा नै रोकिएको नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघको दाबी छ ।